Liverpool oo heshay war farxad leh ka hor kulanka horyaalka Premier League ee ay booqaneyso Tottenham Hotspur – Gool FM
(Liverpool) 27 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa habeen dambe booqaneysa naadiga Tottenham Hotspur kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Reds ayaa u safreysa London iyadoo aanan wax guul ah gaarin shantii kulan ee ugu dambeysay horyaalka, sidoo kalena Manchester United ay ka reebtay tartanka FA Cup-ka.
Balse war farxad leh ayaa usoo yeeraya kooxda Liverpool, iyadoo Jurgen Klopp uu dib ugu yeerayo labo ka mid ah xiddigihiisa muhiimka ah.
Tababaraha Jarmalka ayaa la filayaa inuu safkiisa dib ugu soo daro kabtanka kooxda ee Jordan Henderson iyo xiddiga difaaca dhexe ka ciyaara ee Joel Matip.
Kabtan Hendo ayaa seegay labadii kulan ee ugu dambeysay kooxdiisa isagoo la tacaalayay xanuun dhanka muruqa ah, balse waxa uu taam u yahay kulanka ay booqanayaan Spurs habeen dambe.
Jariiradda The Telegraph ayaa warineysa in Henderson uu dib uga soo muuqan doono khadka dhexe ee shaxda Klopp, maadaama uusoo laabtay Matip kaasoo difaaca dhexe ku wehlin doona Fabinho marka ay booqdaan caasimadda England.
Daafaca reer Cameroon ayaa ka maqnaa kulankii ay kooxdiisa guuldarrada kala kulan Manchester United oo ay ku booqatay Old Trafford ciyaartii looga saaray FA Cup-ka.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa la tacaaleysa dhibaatooyin isugu jira dhaawacyo iyo natiijooyin liita, waxayna kulanka soo aaddan wajahayaan Tottenham oo ka mid ah kooxaha fasalkan ugu awoodda badan horyaaka Ingiriiska.